झापा विद्रोहको कथा | Nagarik News - Nepal Republic Media
झापा विद्रोहको कथा
४ श्रावण २०७५ १९ मिनेट पाठ
कम्युनिस्टहरू रातिराति गीत गाउँथे, “लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ।” त्यही कालखण्डमा झापाका कर्णबहादुर गौतमको हत्या भयो, २०२८ जेठ ३ गते। सो काण्डमा राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, भोगेन राजवंशीलगायतका युवकहरूलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाइयो। २०३० फागुन १३ गते अदालतले मुद्दाको फैसला सुनाएको थियो। बलबहादुर थापा, बिसु राजवंशी र झम्कु राजवंशीले गौतमकाण्डमा सफाइ पाए। ‘वर्गशत्रु’ मास्ने भनेर सुरु गरिएको झापा विद्रोहको पहिलो शिकार थिए गौतम।
नेपालमा राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन भएको दश वर्षसम्म सरकार मात्र परिवर्तन भइरहेको पाइन्छ। किन यस्तो भइरहेको छ त? किन ठूला दलहरू स्थायित्वभन्दा सत्ताको खेलमा दौडिएका छन्? अब अर्को विद्रोह हुँदैन भनेर ढुक्क हुने आधार देखिँदैन, किन?
दलहरू असफल भएका हुन् कि राजनीतिक प्रणाली ? नयाँ पुस्ताले सोच्नैपर्ने समय आएको छ।
ब्रह्माजीले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु र दक्षजस्ता मानसपुत्र पैदा गरेको प्रसंग महाभारतमा पाइन्छ । नेपालमा पनि विदेशी शक्तिले रंगीविरंगी मानसपुत्रहरू पैदा गरेका छन् । दल, मानव अधिकार, प्रेस जगत्, एनजिओ, कर्मचारीतन्त्र, शैक्षिक क्षेत्र आदिमा ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भन्ने स्टिकर टाँसेर राष्ट्रहितविरुद्ध काम गर्नेहरूको कमी छैन । सत्ताका छेउछाउमा पुग्न होडबाजी गर्नेदेखि लिएर विद्रोह गर्ने–गराउने खेलमा अदृश्य शक्तिहरू सक्रिय रहन्छन् भन्ने कुरा इजिप्टदेखि लिबिया, टर्की, सिरिया, यमनलगायतका राष्ट्रमा देखिएको छ । नेपालमा राजनीतिक प्रणाली नै परिवर्तन भएको दश वर्षसम्म सरकार मात्र परिवर्तन भइरहेको पाइन्छ । स्थायित्वको कुनै संकेत देखिएको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ त ? किन ठूला दलहरू स्थायित्वभन्दा सत्ताको खेलमा दौडिएका छन् ? अब अर्को विद्रोह हुँदैन भनेर ढुक्क हुने आधार देखिँदैन, किन ? दलहरू असफल भएका हुन् कि राजनीतिक प्रणाली ? नयाँ पुस्ताले सोच्नैपर्ने समय आएको छ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७५ ०८:४४ शुक्रबार